Iqhawe le-WTN lokuKhokela uKhenketho lweBarbados: UJens Thraenhart, umphathi omtsha we-BTMI
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBarbados Breaking » Iqhawe le-WTN lokuKhokela uKhenketho lweBarbados: UJens Thraenhart, umphathi omtsha we-BTMI
Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • I-WTN
IBarbados yindawo ekhethekileyo, kwaye iiBarbadadi ngabantu abakhethekileyo abanamabali amaninzi ababalisayo. Ibali eliyintloko elibhengeziweyo labhengezwa namhlanje. UJens Thraenhart, oza kujongana neNtengiso yezoKhenketho eBarbados (BTMI) ukusukela nge-1 kaNovemba, kanye ngexesha elifanelekileyo kwiNtengiso yeHlabathi yokuHamba.
Kwiiveki ezine ezidlulileyo, uJens Thraenhart waseCanada / waseJamani wenziwa njengeQhawe lezoKhenketho liNethiwekhi yeHlabathi yezoKhenketho.
Kwiminyaka emininzi, uMnu Thraenhart ebenguMlawuli wezoKhenketho eMekong kwade kwiveki ephelileyo ebezinze eBangkok, Thailand.
Namhlanje, uJens Thraenhart wonyulwa ukuba akhokele ukhenketho lweBarbados
Ngoku indoda eyaziwa njengo Mnu. Mekong ligosa elitsha eliyiNtloko leBarbados Tourism Marketing Inc. (BTMI).
Ukusuka eBangkok ukuya eBarbados, le iyakuba yindawo entsha ejikeleze uJens Thraenhart kunye nosapho.
NguJens Thraenhart, igqala lezokhenketho elineminyaka engama-26, "othe wavela njengomgqatswa ophezulu kwigumbi lokuqala labagqatswa abali-178 abaqeqeshiweyo abavela kwihlabathi liphela" utshilo umbutho.
Uneminyaka engaphezu kwama-25 yokuhamba kumazwe ngamazwe, ukhenketho, kunye namava okubuka iindwendwe kwizikhundla ekusebenzeni, kwintengiso, kuphuhliso lweshishini, kulawulo lwengeniso, kucwangciso lobuchule, nakwishishini le-e. Ekuqaleni komsebenzi wakhe, u-Jens 'ucoceko luye lwaqiniswa naye ekusekeni nasekusebenziseni inkampani ephumelelayo yokutya ukutya, ukuqala inkampani ye-intanethi ye-intanethi yaseNew York kunye nokulawula indawo yokuzimela yegalufa eJamani.
Ngo-2014, uJens Thraenhart wonyulwa ngaBaphathiswa bezoKhenketho eThailand, eVietnam, eCambodia, eLaos, eMyanmar, nase China (Yunnan naseGuanxi) ukuba babe yintloko ye-Ofisi yoLungelelwaniso lwezoKhenketho eMekong (MTCO) njengoMlawuli oyiNtloko. Ngo-2008, wasungula imbasa yokuphumelela kwishishini ledijithali laseChina iDragra Trail, kwaye wakhokela amaqela okuthengisa kunye namaqhinga e-Intanethi kunye neKhomishini yoKhenketho yaseCanada kunye neFairmont Hotels & Resorts. Ukusukela nge1999, ebengu-CEO weChameleon Strategies.
Ufundiswe kwiDyunivesithi yaseCornell eneMasters yoLawulo eyamkelweyo ye-MBA kwi-Hospitality, kunye nesidanga sokuqala seBachelor of Science kwiDyunivesithi yaseMassachusetts, eAmherst, kunye neZiko leYunivesithi "uCesar Ritz" eBrig, eSwitzerland, uMnu. Thraenhart waqondwa njengomnye Ezona nkampani ziphambili zohambo eziphumayo ezili-100 yi-Travel Agent Magazine ngo-2003, zazidweliswe njengenye ye-HSMAI engama-25 yezeNtengiso ezingaMangalisiyo kunye neNtengiso yeeNdawo zokuBuka iindwendwe noKhenketho ngo-2004 nango-2005, yaza yathiywa njengelinye lamaNgqondo angama-20 aQhelekileyo kuKhenketho lwaseYurophu. kunye ne-Hospitality ngo-2014. Ulilungu le-UNWTO eliLilungu, iLungu leBhodi yePATA, kunye noSihlalo we-PATA China odlulileyo.
UMnu Thraenhart unengqondo yokwenene yehlabathi.
Ukuqeshwa kweBarbados kuqala nge-1 kaNovemba.
UJens akazange asebenze kwiCaribbean kodwa uzisa ubunkokheli behlabathi kwiBarbados kunye nommandla oxhomekeke kakhulu kubakhenkethi.
UJuergen Steinmetz, uSihlalo we Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, wayengomnye wabokuqala ukuvuyisana noJens kwisikhundla sakhe esithi: “Eli lithuba elihle kakhulu hayi iJens kuphela, kodwa neBarbados kunye neCaribbean. Ndiyazi iJens iminyaka emininzi. Bekungekho ndlela ibhetele kunale. ”
UJens ulilungu le Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi kwaye kwiiveki ezi-4 ezidlulileyo ndifumene Amagorha ezoKhenketho ibhaso ngalo mbutho wehlabathi.
"Olu lusuku oluhle lweBarbados kunye neHlabathi lezoKhenketho."
Ezokhenketho eBarbados zithe: "Esi sibhengezo siza kungenisa ixesha elitsha lombutho, oza kuthi ubone utshintsho kwi-BTMI iye kwishishini lezentengiso elibuyisela ukusebenza kwayo ukuze ikhuphisane ngcono kwixesha elitsha lobhubhane lokhenketho lwehlabathi."
UJens nguSekela-Sihlalo wesibini weBhodi yaMalungu aManyeneyo ye-World Tourism Organisation (UNWTO) kwaye usebenze kwiibhodi zeshishini kubandakanya iPacific Asia Travel Association (PATA), uMbutho weNtengiso kunye neNtengiso (HSMAI), kunye ne-International Federation yeIT kunye noKhenketho noKhenketho (IFITT), izisa ubudlelwane phakathi kwabo bachaphazelekayo kwiimarike ekujoliswe kuzo kwezokhenketho lweBarbados.
Usihlalo we-BTMI uRoseanne Myers uthe umbutho sele wenze umsebenzi omkhulu wokuvula iimarike kunye nokuseka ubudlelwane kwezorhwebo.
“Sikholelwa ekubeni sidibene namava okhenketho eJens kumazwe aphesheya, ingxelo eqinisekisiweyo yokuphunyezwa kwesicwangciso-qhinga kunye neembono zorhwebo, i-BTMI izakuvela kweli xesha lobhubhane ibe yinkampani eyomeleleyo, eqhuba kakuhle kakhulu ekuthengiseni indawo ezisa inzuzo eyongezelelekileyo kushishino lwethu kwaye uqoqosho olubanzi, ”utshilo.
“Sithathe umceli mngeni wokufumana oyena mgqatswa ubalaseleyo kwisikhundla seCEO ukunceda ukulungisa indlela eya phambili, kwaye sonwabile ngokukodwa ukuba senze njalo, emva kwenkqubo egqibeleleyo neselubala. Samkela uJens kwiqela laseBarbados. ”
Amashumi amabini amaBarbadians kunye nama-27 avela kwiCaribbean ebanzi babephakathi kwabafakizicelo abali-178. Inkqubo yokukhangela kunye nokukhetha yenziwa ziiProfayili zeCaribbean Inc. kunye nekomitana yebhodi kunye neengcali zeshishini. I-arhente ikwaqhubekile nokufikelela kumahlakani oshishino lwengingqi nolwehlabathi lwe-BTMI.